"1 Ho an’ny mpiventy hira. Al-hasheminith. Salamo nataon’i Davida. VONJEO, Jehovah ô, fa efa lany ny tsara fanahy; Eny, tsy misy mahatoky intsony eo amin’ny zanak’olombelona. 2 Samy milaza lainga amin’ny namany amin’ny molotra mandrobo izy; fo mamorom-pitaka no itenenany. 3 Holevonin’i Jehovah anie ny molotra mandrobo rehetra sy ny lela miteny avonavona, 4 Izay manao hoe: hampahery anay ny lelanay; miandany aminay ny molotray; iza no tomponay? 5 Noho ny fampahoriana ny ory sy ny fisentoan’ny malahelo, dia hitsangana Aho ankehitriny, hoy Jehovah; hovonjeko izay vingavingain’ny sasany. 6 Ny tenin’i Jehovah dia teny madio, tahaka ny volafotsy voarendrika tao anatin’ny memy ka mitsoriaka amin’ny tany eny, voadio impito. 7 Hianao, Jehovah ô, no hiaro azy, Hianao no hiambina azy mandrakizay tsy ho azon’ity taranaka ity. 8 Raha avy izay isandratan’ny tsinontsinona eo amin’ny zanak’olombelona, dia mieboebo ombieniombieny ny ratsy fanahy. Fitarainana ataon’ izay azom-pahoriana mafy loatra." Salamo 12:1-8
Eo afovoan’ny ratsy (1-4). Vavaka fitarainan’i Davida izay mahatsiaro ho voahodidin’ny ratsy no hitantsika eto. Fiainana feno fihatsarambelatsihy, endrikendrika, lainga, tsy fanajana ny hafa no misy sy manjaka eo anivon’ny fiarahamonina araka ny Salamo eto. Izany tranga izany dia efa niseho tamin’ny andron’i Davida ary efa voalaza etsy amin’ny Salamo 11 ihany koa. Ary vao mainka amin’izao fotoana izao izay efa andro farany dia miha-mahazo vahana hatrany ny ratsy.
Teny mampitony sy mampahery. Anatin’ny fifandraisana lalina amin’ny Tompo ny mpanao salamo dia mahatsapa fa mahatoky Andriamanitra ary mahatoky koa ny Teniny (6). Mitoetra sy marina mandrakariva koa ny Tompo na dia amin’ny fotoana faran’ny sarotra aza ka mihazona ny olony tsy ho azon’ny ratsy (5). Ny fampaherezana lehibe ho an’ny kristianina dia ny fahafantarany fa momba azy mandrakariva Andriamanitra (7) ary araka ny Matio 28:20b “Ary, indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao”.
Fanontaniana: Manao ahoana ny fiton-drantenanao manoloana ny faharatsiana iainantsika ankehitriny? Mijoro sa lavon’izany?
Hafatra: Aza mety ho resin’ny ratsy ianao, fa reseo amin’ny soa ny ratsy. Rômanina 12. 21.